Shiinaha SPC Dabaqa JD-060 Soo-saar iyo Warshad | Dheeraad ah
Qurxinta guriga cusub, dabaqa qoyska qaar dabaqa alwaax dukaan buuxa ah, laakiin waqti dheer, cillad sagxad alwaax ah, xagal qulqulaya, oo aan biyuhu kajirin, hadda qalabkan ayaa si gaar ah caan ugu ah dalal shisheeye, 0da rasmiga ah ee rasmiga ah, ma ahan qaab beddelid, layaab malahan caan ~
Dabaqa SPC badanaa wuxuu ka samaysan yahay budada kalsiyum, oo ka kooban lakabka daahfuran ee 'PUR Crystal Shield', lakabka iska caabbinta, lakabka filimka midabka ah, SPC polymer polymer layer iyo jilicsanaanta aamusnaanta aamusan. Waxay caan ku tahay suuqa qurxinta guryaha shisheeye, waxayna ku habboon tahay dabaqa guriga.
Dabaqa SPC ee nidaamka wax soo saarka bilaa xabagta, sidaa darteed kuma jiraan formaldehyde, benzene iyo walxo kale oo waxyeello leh, dhabta dhabta ah 0 dabaq cagaaran ee formaldehyde, waxyeello uma geysan doono jirka aadanaha.
Sababtoo ah dabaqa SPC wuxuu ka kooban yahay lakab u adkaysta dharka, budada dhagaxa macdanta iyo budada polymer, kama baqeyso biyaha si dabiici ah, loomana baahna in laga walwalo dhibaatada cilladaha iyo caaryada oo ay keenaan finan ka soo baxa dabaqa guriga. Biyuhu, saamaynta caaryadu aad ayey u wanaagsan yihiin, sidaa darteed musqusha, jikada, balakoonka waa la isticmaali karaa.
Dusha sare ee dabaqa SPC waxaa lagu daaweeyaa pur Crystal Shield, sidaas darteed waxay leedahay waxqabadka kuleylka kuleylka wanaagsan. Xitaa haddii aad cagaha ku dul marto, dhaxan ma noqon doono. Waa mid aad u raaxo leh. Intaa waxaa dheer, waxay ku dareysaa lakabka tiknoolajiyada dib-u-celinta, oo leh dabacsanaan wanaagsan. Xitaa haddii aad laabto 90 digrii si isdaba joog ah, uma baahnid inaad ka walwasho xanuunka dhacaya. Waxay aad ugu habboon tahay qoysaska leh dadka da'da ah iyo carruurta.
Dabaqa SPC wuxuu noqon doonaa mid "astringent" ka dib markay la kulmaan biyo, taas oo ah, xoogga isku dhaca ayaa sii weynaan doona, iyo waxqabadka ka hortagga taraatikada oo aad u wanaagsan. Diidmada xirashadeeda sidoo kale waa mid aad u sareysa, taas oo ah, isticmaalka kubbadda birta ah ee sagxadda dhabarka, ma jiri doonaan xoqitaan, nolosha adeegga in ka badan 20 sano.
Intaa waxaa sii dheer, dabaqa SPC waa mid aad u fudud, oo leh culeys dhan 2-7.5kg halkii mitir laba jibbaaran, taas oo ah 10% qalabka dabaqa caadiga ah. Waxay si wax ku ool ah u badbaadin kartaa dhererka booska waxayna yareyn kartaa awoodda qaadista ee dhismaha.
Hore: Dabaqa SPC 1903
Xiga: SPC Dabaqa JD-061